Rodobe : Tsy mihemotra, lasa izao ! – MyDago.com aime Madagascar
Tatitry ny kabary teo amin’ny Magro Behoririka :
Araka ny kabary heno androany teny kianjan’ny Finoana dia hatokana hoan’ny gadra politika ny hetsika rahampitso, koa manainga ny besinimaro izy ireo hamonjy ny tolona.Ireto indray ny tatitry ny kabary teny an-kianja androany 10 mai 2011.
Malalatiana : nolazain’ny FAT taloha fa tsy ekena raha mitsabaka amin’ny raharaha-tonkatranon’ny Malagasy ny vahiny, rehefa tsy tafavoaka intsony anefa ry Andry Rajoelina dia any ivelany no anton’asa hoy ity « vehivavy MFM » ity. Izay ve ilay hambopom-pirenena hoy izy?
Ilay firenena efa nandroso ary tsara laharana iny no indro lasa firenena farany mahantra noho ny fanonganam-panjakana nataon’ny FAT hoy hatrany izy.
Doc Julien : lany haika amin’ny hataon’ny FAT sy ny forongony ny rehetra sady tsy menatra ka tapa-kevitra hanala azy ireo fa manimba firenena .Betsaka no manontany hoe hanao ahoana io rodobe io satria dia efa miomana koa ny miaramila. Tsy mihemotra io. Rehefa mihemotra isika dia very ny firenena ary ho lasa varoboba ny harena ankibon’ ny tany. Tsy vita amin’ny kaikaika intsony izy ity ry vahoaka fa mila mirodorodo ny isika hanala an’I Andry Rajoelina eo hoy Doc Julien.
Sylvain : nanao antso avo I Sylvain : “efa tapitra ny lalana ho an’ i Andry ry tafika”, nanome 48 ora ianareo tamin’ilay “feuille de route”, mbola eo isika hatramin’izao. Ianareo tafika anie sisa no vahoaka manohana an’i Andry hoy ity mpandahan-teny ity.
Odette Manantsoa : any an-tanim-boanjo no fotoana raha niresaka momba ny rodobe izy. Isika izao koa dia efa vita vaksiny tamin’ny fonja satria dia efa in-telo tany Antanimora ka hiaraka ainareo eto Antananarivo mandra-piverin’ny ara-dalana hatrany aho hoy ity renim-pianakaviana , vonona hitarika ny vehivavy hoy ramatoa Odette.
Député Jean Ernest (Antsirabe) : teto aminareo teto izahay delegasiona mafonja iray volana alohan’ny nigadranay. Isaorana ny rehetra tsy nanadino ary nitotototo, nampahery ary nanampy anay. Eto koa dia isaorana ny tribonaly Antsirabe tamin’ny “neutralité”-ny tsy adino koa ireo mpitsara. Efa nogadraina tokoa izahay ary niharitra ny mafy ka tsy maintsy mandroso. Ho avy maro izahay Vakinankaratra toy ny efa nataonay teny Ivato ka tsy hiala izahay raha tsy tafapetraka ny zavatra nekena, izaho kosa tsy nahandry ny andro alakamisy fa dia efa eto sahady hoy ingahy Ernest.
Dominique : tandremo sao dia mivadika ny rasa ry emmoreg. Tsy ny rodobe mantsy no hanimba zavatra fa ny olon’ny FAT no mampikarama handroba indray. Ny rodobe tsy miverina. Aoka isiaka tsy hanamaivana ny hatao.
Ignace : mamaly isika rehefa sanatria ka midaroka antsika ny herim-pamoretana. Mitohy ny rodobe mandra-piala an’i Andry Rajoelina hoy ny solon-tenan’ny Moramanga.
Manoela : milatsaha daholo amin’ny fifidianana filoham-pirenena fa « 1 er tour dia vita »n’i filoha Ravalomanana io hoy izy. Rehefa darohana isika dia mamaly amin’izay ary hivaly aminareo ireo ny ratsy nataonareo ry FAT.
Mektoub : atomotra ny fotoana. Tsy amin’ny 20 ny volana mey indray ny fivorian’ny SADC fa 23 indray hono. Tsy afaka miandry isika fa miroso. Tsy hisian’ny ahiahy no handrosoantsika hatrany.
Olivier Rakotovazaha : raha jerena ny gazety sy ny haino aman-jery dia tsy misy mamiratra ho an’ ny foza. Namantsika ny gadra politika ka hotronitsika izy ireo rahampitso.
Taratasy fisaorana no atolotsika ho an’ny amerikana satria tena lahy matoan’ny demokrasia tokoa izy. Efa nisy nandeha mialoha any nangataka fazahoanana alalana ho any ka raha sanatria tsia ny valin-tenin’izy ireo dia teneniny eto ihany .
Ahoana isika no samborina nefa tsy nandromba, tsy nampiasa milisy, tsy nampitahotra tami’ny basy, tsy namono olona ary ny migadra dia voninahitra ho anay Bara.
Tsy avy amin’ny mpitarika koa ny hevitra amin’ity rodobe ity fa avy amin’ny vahoaka.
Izao tontolo izao dia tsy maintsy manaraka ny SADC ary ireo tsy manaiky putschiste hoy Rakotovazaha tety an-kianja androany.
Auteur Solo Razafy*Publié le 10 mai 2011 10 mai 2011 Catégories Politique
Précédent Article précédent : La SADC doit tenir compte…
Suivant Article suivant : VIDEOS, 10 mey 2011